बजार बढेसँगै कम मूल्य भएका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण
मंगलवार जोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९.३ प्रतिशत वृद्धि
भदौ २३, काठमाडौं । पछिल्लो समय बजार बढेसँगै कम शेयरमूल्य भएका कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । पछिल्लो एक हप्तामा ११ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यलाई लिएर गरेको विश्लेषणले यस्तो देखाएको हो ।
कम मूल्य भएका कम्पनीको शेयर मूल्यमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै मंगलवार जोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ३० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । उक्त दिन कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ९४ पुगेको हो । मंगलवार कम्पनीको १५ हजार ५२१ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
एक हप्तामा ११ अंकित मूल्यभन्दा कम भएका कम्पनीको शेयर मूल्यलाई लिएर गरेको विश्लेषणमा सबैभन्दा बढी जोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको शेयर मूल्य एक हप्तामा ३४ रुपैयाँ बढेको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयरमूल्य एक हप्तामा २१ रुपैयाँले बढेर मंगलवार प्रतिकित्ता रू. ९७ पुगेको छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत ३३ ओटा जलविद्युत कम्पनीहरुमध्ये ११ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल रहेको छ । सबैभन्दा कम शेयर मूल्य दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको रहेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य मंगलवार प्रतिकित्ता रू. ५५ रहेको छ ।
बढेको बजारमा अंकित मूल्यभन्दा तल रहेका कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेमा पनि अल्पकालिन रुपमा लाभ लिन सकिने एक लगानीकर्ता बताउँछन् ।
यसरी हेर्दा लगानीकर्ताहरुले कम मूल्य भएका कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको बजारमा अल्पकालिन रुपमा लगानी गरीे निश्चित प्रतिफल पाएपछि विक्री गर्ने गर्दछन् । नियामक निकायको प्रभावकारी मूल्यांकन र हाइड्रोपावर कम्पनी भित्रको आर्थिक सुशासन राम्रो भएमा आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ ।
नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकले माघ १३ गतेदेखि शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने[२०७७ माघ, १२]
५ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य ९ % भन्दा बढीका दरले वृद्धि[२०७७ माघ, १२]